Ny tanjona tsara indrindra amin'ny totozy 24 Tattoo ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy - tetikasam-borona
Ny tanjona tsara indrindra amin'ny totozy 24 tatoazy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Desambra 1, 2016
Raha ny zava-mitranga amin'ny vatanao no mampifandray anao, dia misy ny teboka eo amin'ny vatanao izay hanome anao ny endrika mahafinaritra izay ilainao. Rehefa manana tattoo-nify toy izany ianao, ny rehetra dia mandinika anao rehefa misy zavatra mitovy amin'izany.
1. Tovo-kavoana mahery sy marevaka tato ho an'ny lehilahy
2. Teti-tigra miampy ny vavony vavy
Tena mahavariana tokoa ny tavy tazo ho an'ny vehivavy, mahita olona iray miaraka amin'ny teti-tigre ianao ao amin'ny #stomach ary manontany tena ianao hoe ahoana no nahatonga ilay olona. Tianao ve ity tatoazy ity?
3. Ny amboadia mamirapiratra sy lolo mamirapiratra dia mitodika amin'ny tato ho an'ny tattoo ho an'ny zazalahy
Ity mama #tattoo ity dia somary tsotra kokoa noho izay mety hiahiahianao ary mitaky zavatra roa izay azo avy amin'ny ankamaroan'ny trano fonenana avy hatrany. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mahazo mpanakanto mahay afaka manampy anao amin'ilay sary. Ny faharoa dia ilay endrika izay ilainao.
4. Karazana tsiran-tsavony kendrentsika karazam-bolo ho an'ny ankizilahy
Ny tatoazy mahafatifaty tsara tarehy dia tsara indrindra any amin'ny tsara indrindra amin'ny tatoazy rehetra. Misy fotoana izay tiantsika hialana amin'ny faritra mampionona ary mampiasa tatoazy toy izany isika.
5. Tetikasan'ny totozy mamiratra ho an'ny zazavavy
Azonao atao ny misarika ny eritreritrao amin'ny taratasy alohan'ny hanomezana azy fitifirana amin'ny hoditrao. Ny vavony dia iray amin'ireo faritra ao amin'ny vatan'ny tattoos mijery haingana be indrindra indrindra rehefa manana saina mamorona ianao mba hampifangaroana ny voary manontolo.
6. Ny famonoana tato an-tseza tato ho an'ny tattoo momba ny vavony
Ny vehivavy dia tia an'ity tatoazy ity noho ny fomba fijeriny. Ny ankamaroany dia nahita vehivavy maro nampiasa an'io tatoazy io izay tena mahafinaritra tokoa ny mahita.
7. Tira ho an'ny tigra manintona tarehy tattoo amin'ny lomotra
8. Mofomamy mofomamy mofomamy mipetaka eo amin'ny lomano
9. Kanto tatoazy amin'ny endriny ambony
Ity karazana tatoazy matavy ity dia ny sokajin'izao tontolo izao ary tsy ny rehetra no afaka mahazo izany. Rehefa miezaka mifehy ny manodidina anao ianao, ny tatoahanao #design dia zavatra tsy azonao atao.
10. Tattoo vita tavy manga amin'ny endrin'ny vavony
11. Tazomoka mahavariana tebiteby tato ho an'ny lehilahy
Tsy misy mahita ny tatoazy ao amin'ny vavony ary tsy te hanolotra anao ho fanomezam-boninahitra azy amin'ny fijoroany amin'ny zavatra mahafinaritra sy mahatalanjona. Azonao lazaina fa ity tatoazy ity dia tena mahavariana sy mahafinaritra.
12. Tazo mahavariana tato ho an'ny tavoahangy tato ho an'ny kibo
13. Tezitra mafy i Wolf, teboka tebiteby marevaka tsara ho an'ny zazavavy
Eritrereto ny mety hahafahanao mahazo tatoazy an-doha amin'ny vehivavy iray ary te-haneho anao foana ny olona rehetra, ahoana no hahatsapanao izany? Ny totozy ao an-tokantrano dia tonga amin'ny endrika sy tarehy samihafa. Rehefa te haka sary ianao, dia manomboka amin'ny tattoo izay mety hampiavaka anao.
14. Sary manintona loko manintona mamiratra ho an'ny lehilahy
15. Zava-manahirana mahavariana amin'ny baomba manintona ny vehivavy
Amin'izao fotoana izao, raha mitady tatoazy an-tebiteby ianao, dia makà fotoana fikarohana raha vehivavy ianao ary mahazo endrika mamaitra mampitolagaga izay manintona ary manana dikany maro mifandray aminy.
16. Tatoazy eo amin'ny lafin'ny vavony tsara ho an'ny zazavavy
17. Lolo marevaka sy tattoo -n'ilay zazavavy tattoo ao amin'ny vavony vavy
18. Ny tato ho an'ny fo tato amin'ny kibon'ny kibo
Raha vehivavy ianao no mitady zavatra tsotra sy mahafinaritra, dia tsara kokoa raha mandeha amin'ny tato an-tebiteby izay tsy mibaribary eo amin'ny masony. Ireo totozy volom-boasary dia nanjary toy ny lamaody mahazendana mampiasa ny vavony.
19. Totozy amin'ny tazo manga sy lolo ny tato ho an'ny vehivavy
Ny tatoazy matavy be dia nanjary zavatra mety tsy tianao hohalavirina raha mieritreritra ny hamolavola an'io lamina io ianao.
20. Ny totozy tato ho ato dia ny manafatra marika marika
21. Zava-bady mahatsikaiky ho an'ny zazavavy
22. Tattoo tetehina mifangaro amin'ny mony
23. Tiger stomach tattoo ink mamorona hevitra ho an'ny lehilahy
24. Ny mofomamy sy ny voninkazo mavomavo tattoo ho an'ny zazavavy
koi fish tattooloto voninkazotattoos footHeart Tattoostattoosdiamondra tattoocompass tattoomoon tattoostattoos backmasoandro tatoazymehndi designtattoos rahavavymozika tatoazyelefanta tatoazytattoo watercolorNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoo infinitytatoazy lolorip tattoostanana tatoazytattoo ideastattoos crosstattoosscorpion tattootattoos ho an'ny lehilahytatoazy ho an'ny zazavavyTatoazy ara-jeometrikatatoazy fokofitiavana tatoazytattoos sleevehenna tattootatoazy voninkazolion tattoosAnkle Tattoostattoos mahafatifatytratra tatoazytattoos voronaarrow tattootattoos armnamana tattoos tsara indrindratato ho an'ny vatofantsikatattoo octopusanjely tattoosTattoo Feathertattoo eyecat tattoosraozy tatoazytattoo cherry blossomtattoos mpivadyeagle tattoos